Noocyo bilaash ah oo loogu talagalay naqshad ka duwan mashaariicdaada | Abuurista khadka tooska ah
Inta badan naqshadeeyayaasha naqshadeynta iyo kumbuyuutarradu waxay had iyo jeer horumariyaan astaamaha, laakiin waxaa laga yaabaa inay taas gartaan waxaa jira naqshado badan oo la abuuray inay horeyba u isticmaaleen dhammaan qalabkii ay haysteen, iyagoo abuuraya tan in astaantuhu bilaabaan inay isku mid noqdaan oo ay kuwa kale ka dhalan karaan maxaa yeelay dhammaantood waxay leeyihiin qaab isku mid ah.
Haddii aad dhibaatadan leedahay, ha ka welwelin, maanta waad ogaan kartaa qaar noocyada kala duwan Iyo waxa ugu fiican oo dhan waa inaadan bixin doonin ama aadan wax siinin wax soocelin ah, maadaama kuwani ay gebi ahaanba bilaash yihiin oo ay leeyihiin astaamo aad u asal ah oo hal abuur leh oo kufiicnaan kara qaababka cusub ee aad rabto inaad ku adeegsato naqshadahaaga.
1 Noocyada kala duwan ee farta loo isticmaalo
2 Wadada X
3 Xiddiga soo kacaya
Noocyada kala duwan ee farta loo isticmaalo
Aad bay muhiim u tahay inaad xusuusato taas haddii aad rabto samee laba nooc midkoodna wuxuu leeyahay qaab aad u fiican, waa inaad raadisaa mid kale oo leh astaamo gebi ahaanba ka duwan oo aan ka qaadayn nooc kasta oo caan ah font weyn ee aad rabto inaad isticmaasho.
Hadaad danaynayso inaad hesho qaabab cusub, naqshado iyo fikrado si shaqooyinkaagu aysan u joojin layaabka dadka kale, sii wad aqriska waxaadna ogaan doontaa qaabab cusub oo aan waxba kuugu kici doonin oo aad ka heli karto raaxada gurigaaga.
Midka koowaad waa Wadada X, kani waa nooc gaar ah oo shakhsiyaddu ka buuxdo, wuxuu leeyahay khadad toosan oo lagu qaldi karo sans serif, laakiin faraqa waxaa sameeya faahfaahin kasta oo leh astaamaheeda. Faahfaahintaan waxay ka soo qaadayaan farta farta leh ee caajiska ah inay ka bilaabato inay yeelato xoogaa mug ah.
Tani ma ahan far qoraal ah oo loogu talagalay in badan la isticmaalo, waxaa badanaa loo isticmaalaa sharaxaadda baakadaha iyo astaamaha.
Xiddiga soo kacaya
Nooca ku xiga waa ku habboon dadka qorsheynaya inay sameeyaan hal astaan ​​istaroog waana font loo isticmaali karo in lagu kabi karo, waxaan ka hadlaynaa xiddigta Rising, tani waa font lagu heli karo bilaash.
Sidoo kale inta udhaxeysa noocyada noocyada font ee la heli karo Waa suurtagal in la sameeyo isku-dhafyo qurux badan oo had iyo jeer la xiriiri doona qaabka aad rabto inaad hirgeliso.
Waxa ugu fiican ayaa ah asalnimada mid kasta oo ka mid ahi haysto tanina waxay samayn doontaa inay iyagu istcimaalaan si loo gaaro astaan ​​ama qaab gebi ahaanba ka duwan qoraalka ama sadarka. Noocaan ayaa ah mid faa iido badan leh maxaa yeelay wuxuu leeyahay qaabab kala duwan kuwaas oo ku habboon shakhsiyaad kala duwan, markaa waad isticmaali kartaa nooca ugu yar si aad u gaarto qaab gaar ah ama sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa inay tahay miridhku ama roouh muuqaal u eg guridda.
Ugu dambayn waa inaan sheegnaa isha Lauren Scrip, kani waa font si gaar ah loogu talagalay in lagu shuboIn kasta oo ay u muuqato in dhammaan qaababku isku mid yihiin, waa inaad ka feejignaataa qallooca astaamaha iyo qaabka garaaca mid kasta oo ka mid ah. Waxa ugu badan ee ka muuqda qaabkani waa taas waa suurtagal in la ciyaaro ciyaar u dhexeysa bilowga iyo dhamaadka erey kasta si ay ugu muuqato inay jirto wax sii socda oo u dhexeeya.
Mid kale oo xusid mudan waa Vintti, waxaa la dhihi karaa liiska oo dhan, kani waa kan matalaada hal abuurka badan ee noocyada oo dhan. Waxaa la sheegay inaysan u kala badneyn sida kuwa kale ay yihiin, laakiin waxay noqon kartaa midda lagu tilmaamay qaabka aan u horumareyno, maadaama ay micno aad u cad siineyso mashruuca oo aan loo baahneyn in la isticmaalo waxyaabo badan oo dheeri ah.
Sida aad u jeeddo waa qaabab gebi ahaanba ka duwan oo aan caadi ka ahayn barnaamijyada dhaqan ahaan loo adeegsado, waad soo dejisan kartaa oo aad fiirin kartaa si aad isugu daydo jilayaasha kala duwan ee ay bixiso waxaadna dooran kartaa midka ku habboon qaabkaaga ama midka ay macaamiishaadu doonayaan inay helid
Waxaad awoodi kartaa sii xoogaa asal ah iyo farsamooyin cusub adigoon lacag ku bixin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Bilaash iyo noocyo kala duwan oo nooc ah